Ny WhatsApp beta dia mamela anao hijery horonantsary YouTube nefa tsy miala amin'ny fampiharana | Vaovao momba ny gadget
Ity dia zavatra iray izay nangatahan'ny mpampiasa ity fampiharana hafatra ity nandritra ny fotoana ela, ankehitriny ao amin'ny kinova beta farany navoaka ity safidy ity dia hita fa hamela milalao horonantsary Youtube mivantana ao amin'ilay fampiharana. Ho fanampin'izay, nampiana ny zava-baovao izay mamela ny fandraisam-peo "fanakanana" handefa ny rantsan-tànana sy ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana sy ny filaminana.
Ity kinova v2.18.102 Ao amin'ny beta izy ary antenaina havoaka ho an'ny mpampiasa atsy ho atsy, saingy tsy misy daty voafaritra na voamarina ka mila miandry kely kokoa isika. Amin'ireny fotoana ireny dia mihatsara be ny rindranasan-kafatra ary manaporofo izany ireo fiovana ireo izay manamora ny fampiasana azy na ny rano indray mitete amin'ny serivisy amin'ny daty manokana.
WhatsApp dia nihatsara hatrany
Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity kinova beta vaovao ity dia ny safidy vaovao hitendry horonantsary avy amin'ny sehatra YouTube ao amin'ilay fampiharana mihitsy, tsy mila miala amin'ity ary afaka manohy mampiasa WhatsApp. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia afaka manohy miresaka amin'ny ara-dalàna tanteraka ary tsy miala amin'ny sehatra video ary avy eo miditra amin'ny sehatra fandefasan-kafatra.
Mampifanaraka amin'ny fampiharana mifanaraka amin'ny PiP -Picture-in-Picture- dia mbola iray amin'ireo fanatsarana miavaka amin'ny kinova amin'ny rafitra fiasa Android Oreo, zavatra iray izay tohizan'ny mpandraharaha hatrany. Raha fintinina dia andiam-panatsarana izay azo antoka fa hanome fahafaham-po ireo mpampiasa mavitrika indrindra amin'ity fampiharana ity, eny, tsy maintsy manantena isika fa mandeha tsara ny beta ary ho hitantsika rehefa navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Ho an'ity, ny zava-drehetra dia ao anaty fitsapana ary ilaina ny kinova beta hahafahana mitsapa ireo vaovao ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ny WhatsApp beta dia ahafahanao mijery horonantsary YouTube tsy miala amin'ny fampiharana